Liyini iqhwa lekhabe? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe sihle, akunjalo? Yize kungahle kubonakale kunjalo, ayithathwa kabusha ngePhotoShop noma yiluphi uhlelo lokuhlela isithombe, kepha ingeyokuqala ngokuphelele. Isithwathwa asihlali simhlophe ngaso sonke isikhathi, futhi singaba bomvu, yize kwabaseMelika sithola umbala ojwayelekile wamakhabe, yingakho saziwa ngokuthi iqabunga lekhabe.
Kodwa, Yini ebangela ukuthi ibe nalo mbala?
Ngokusobala kukhona ulwelwe oluhlaza oluncane olunamagama aluhlaza ogama lakhe lingokwesayensi I-Chlamydomonas nivalis que ube nombala obomvu emvilophini yayo ene-gelatinous ebavikela emisebeni ye-ultraviolet evela ezifundeni ezibandayo. Ngokufika kwentwasahlobo zikhula ngokushesha okukhulu, zinikeze indawo emhlophe umbala omuhle kakhulu opinki noma obomvu.
Ukuze ukwazi ukubona iqhwa lekhabe ungaya kunoma yisiphi isifunda se-polar, kepha kunconyelwa ikakhulukazi ukuya ISierra Nevada yaseCalifornia (EU.S). Minyaka yonke iziqongo zayo zinamabala kulo mbala odonsa ukunaka okukhulu.
I-Watermelon snow nokufudumala kwembulunga yonke
Yize kushiya izindawo zihlaba umxhwele, iqiniso elidabukisayo ukuthi njengoba iplanethi ifudumala, ulwelwe lukhiqiza kalula. Ngokwenza njalo, bavimbela iqhwa elimhlophe ekuboniseni ukukhanya kwelanga, kusheshise i-a 13% inqubo yokuncibilika kweqhwa, njengoba kuvezwe ocwaningweni olwenziwe yiqembu lososayensi abavela eGerman Research Center for Geosciences, ePotsdam, nase-University of Leeds (United Kingdom), futhi yashicilelwa kumagazini wesayensi Nature.
Ngakho-ke, lesi simanga sokufuna ukwazi siba yisibonakaliso esisodwa sokufudumala kwembulunga yonke, ngendlela yokuthi kubalulekile ukuthi sikucabangele ukuze kuqondwe izinguquko ezenzeka emhlabeni ngobunzima bawo bonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Liyini iqabunga lekhabe?